फेसबुकलाई १५६ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना !! – Nepal
मार्च 17, 2018 admin	Comment(0)
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएका छन् । बेल्जियमको एक अदालतले १५६ मिलियन अमेरिकी डलर (१६ अर्ब बढी नेपाली रुपैयाँ) बराबर जरिवाना तोकेको हो ।
गोपनियातासँग सम्बन्धित कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै फेसबुकमाथि १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको जरिवाना तोकिएको छ । फेसबुकले ‘थर्ड पार्टी’ तेस्रो पक्षीय अनलाइनहरुलाई ट्र्याक गरेर गोपनियतासँग सम्बन्धित कानून उल्लङ्घन गरेको अदालतको ठहर छ ।बेल्जियमको अदालतले फेसबुकबाट यूजर्स (प्रयोगकर्ता)हरुको डाटा (विवरण) संकलन गर्न नपाउने आदेश समेत जारी गरेको छ । साथै अदालतले फेसबुकलाई हरेक दिन २ लाख ५० हजार यूरो जरिवाना तिर्न पनि भनेको छ ।
अदालतका अनुसार फेसबुक आफ्ना प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन (स्टोर) गर्न प्रयोगकर्ताको इच्छाको कुनै परवाह गर्दैन । फेसबुकले विज्ञापन र प्रयोगकर्ताको अनुभव बढाउन अन्य वेबसाइटबाट यूजर डाटा ट्र्याक गर्छ । जसमा फेसबुकको ‘प्लग इन्स’ दिइएको हुन्छ ।
मार्च 7, 2018 मार्च 7, 2018 admin
अस्ट्रेलिया यस्तो देश हो जहाँ नेपाली सवारी चालक अनुमतीपत्रले निर्वाध रूपमा गाडी चलाउन पाइन्छ। तर, पछिल्लो दिनमा केही हेलचेक्राइ र नक्कली लाइसेन्सका कारण अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाली लाइसेन्सवालालाई कडाइ गर्न थालेको छ। नेपाली लाइसेन्सले सवारी चलाउन पाउने भएपछि अस्ट्रेलिया जान तयार भएका विद्यार्थीहरू नेपालमा लाइसेन्सको जोहोमा लाग्छन्। सके पावर भिडाएर नसके गारो मसिनो गरेर पनि लाइसेन्स […]
भाटभटेनी सुपरमार्केटको ठगी धन्धा, सपिङ जाँदा ख्याल गर्नुहोस् !!
अप्रील 11, 2018 अप्रील 12, 2018 admin
काठमाडौं, भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको नाम चलेको ब्रान्ड हो। एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा यसको सुपरस्टोर छ। त्यही मध्येको एक कलंकीमा शनिबार सपिङ गर्दाको अनुभवबाट तपाईँलाई सचेत गराउँदैछु- ध्यान दिनुस् नत्र ठगिनु होला। शनिबार राति सपिङ गर्ने क्रममा सामान लिँदालिँदै २५ थोक पुगेछ। स्टोर बन्द हुने बेला भइसकेको थियो। काउन्टरमा बसेकी कर्मचारीले एक-एक गर्दै सबै सामानको कोड […]
भारतको हिमाञ्चल राज्यमा पर्ने काँगडामा सोमबार साँझ एक स्कुल बस दुर्घटनामा पर्दा २७ बालबालिकासहित ३० जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार वासिङराम सिंह मेमोरियल विद्यालयका विद्यार्थीलाई घर छोड्न हिँडेको बस दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबै बालबालिका १० वर्ष मूनिका थिए। दुर्घटनामा परी २ शिक्षक र बस चालकको पनि मृत्यु भएको छ। बसमा […]
स्कुटर दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु !!